Koox Jwxo-shiillo ah oo Ergo u Tagay Nairobi Aadna Indhaha Loogu Hayo – Rasaasa News
Koox Jwxo-shiillo ah oo Ergo u Tagay Nairobi Aadna Indhaha Loogu Hayo
Jun 20, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Nairobi – Kenya [June 19, 2009] – Warar hordhac ah oo naga soo gaadhaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in koox Jwxo-shiilo ah oo ayna ku jirin kooxda kale ee Jwxo-shiilada in ay wadaan ololeyaal ay kaga dalbanayaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya in aanay la qabin dambiyada uu galay MR. Jwxo-shiil. Hase ahaatee waxaa ay wax u doonayaan Jwxo-shiil oo uu hada jid walba ka soo xidhmay la,ana meel uu lfihiisa geeyo.
kooxdan Jwxo-shiilo [Qabiil ku ONLF], oo ku raad gadanaya arimo qaraabonimo iyo qabiil, doonayana sidii ay u baabi,in lahaayeen dunuubta uu Jwxo-shiil galay ee leh; mid halgan iyo mid reernimaba. Kooxdan Jwxo-shiilo oo ka ambabaxay dalka Ingriiska ayaa muddo aamusnaa oo dhawrayey bal sida uu xaalku noqdo, ileen halgankii way soo af jareen oo way ogg yihiin isaga ee bal in ay badbaadiyaan dambiilayaalka uu Jwxo-shiil ugu horeeyo.
Waxaa kale oo iyana dhaqdhaqaaq ka wada magaalada London Jwxo-shiilo doonaya in ay kasbadaan Jwxo-shiilada, dadkan oo ah duqay ay isku jilib yihiin Jwxo-shiil ayaa waxaa horboodaya nin magaciisa naloogu sheegay Ilow.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa intii uu dhacay dilkii Dr. Maxamed Sirad Dolal, waxaa ka taagnaa colaad aad u xun waayo waxaa magaalada Naribi jooga qaar ka mid ah ragii ka qayb qaatay dilkii Dr. Dolal oo wali magaalada lagu qarinayo. Dhinaca kale waxaan jirin wax ergo ah oo ka socota dhinaca Jwxo-shiilo oo aan iyagu diyaarba u ahayn in ay waxa ka yidhaahdaan dilkii ay gaysteen iyo burburka ay halganka u gaysteen.
Jwxo-shiilo, waxay uga digeen Jwxo-shiil in uusan ka soo bixin godka uu ku jiro inta ay is badalayso xaaladu, waxaana ay qiyaasayaan in xiligan uu damay karkii ka kacay dilkii Dr. Dolal, sidaasina waxaa ay hada u bilaabeen bal in ay sameeyaan heshiis aan wixii dhacay laga hadal. Waxaan filayaa in Jwxo-shiilo ay ka dhacsan yihiin, Dr. Dolal waxaa uu ahaa nin baal dahab ah kaga qoran halganka iyo maskaxda dadka Somalida Ogadeeniya, inta uu jiro magaca ururka Jwxo, waxaa jiri xusuusta dilkii Dr. Dolal, waxaana ay arintu had iyo goorba ahaan wax cusub, waxana ayna boogtu ka bogsanaynin ehelka Dr. Dolal, tolkiis iyo ummadii uu halganka gadh wadeenka ugu ahaa.
Sidda ay wararku sheegayaan waxaa Nairobi si ula kac ah u aaday nin lagu tix galiyo in uu xidid yahay oo magaciisa na loogu sheegay Yuusuf, waxaana uu isku dayey in uu shir ku qabto Nairobi isaga oo u hadladiisa ay ka muuqato yaan lagu dareemin. Waxaa wanaagsanaan lahayd in uu Ogaado xididku in uu yahay labada meelba oo uusan arkin uun dhinaca beesha uu yahay, haddii uu sii wado arimahan qabiilka ee uu wado waxaa xaqiiq ah in uu dhamaan xishoodku, hadii uu doonayo wanaaga waxaa fiican in uu kuwa gashiga qaba uu u sheego in ay gar qaataan.
Sidda na loo sheegay waxaa la socda nin ay isku meeqaan yihiin laakiin ay aad isugu dhaw yihiin Jwxo-shiil, labadooduba waxaa ay u sheegeen in ay Nairobi u tagayaan in ay soo hawo gadistaan, laakiin runtu waxay noqotay in ay Olole qabiil u samaynayaan MR. Jwxo-shiil. Labadan nin hore uma ayna ahayn xubno ururka ONLF, laakiin waxaa ay ka mid yihiin dadka Qabiilka ONLF ku ah.
Labadn nin waxaa ay ka tageen baal la lee yahay Dalka Ingriiska, gaar ahaana Magaalada Brimingham, waxayna horaan u daganaan jireen dalka Denmark. Waxaana aad loola socdaa dhaqdhaqaaqooda, waxaa kale oo aad loola socdaa dhaqdhaqaaqa ay doonayaan Jwxo-shiilo in ay ka bilaabaan
Eritariya oo Dhibaatadii ay ka Waday Geeska Afrika ay Noqotay mid Saamaysa cid Walba
Kooxdii Jwxo-shiilada oo ku Sugan Xaaladii Orggiga.